सुनकेशरीको अपेक्षा - मनोरञ्जन समाचार - प्रकाशितः जेष्ठ ६, २०७५ - साप्ताहिक
व्यवसायिक रूपमा सफल चलचित्र कोहलपुर एक्सप्रेसमा पृथक् अभिनय गरेर चर्चामा आउने अभिनेत्री हुन्— ऋचा शर्मा । उक्त चलचित्रमा सोसल साइटमा चर्चित तिर्सना बुढाथोकीको शैलीमा संवाद बोल्ने ऋचाको नाम पनि तिर्सना नै छ । चलचित्रको ट्ेरलर मात्र होइन, समग्र चलचित्रमै ऋचाको उक्त चरित्रलाई दर्शकहरूले मन पराए ।
केही समीक्षकले उनको पात्रलाई लाउड भने पनि समग्रमा ऋचा पृथक् देखिएकी थिइन् । यतिबेला ऋचा आफ्नो नयाँ चलचित्र सुनकेशरीमार्फत अझ पृथक् शैलीमा प्रस्तुत हुने तयारीमा छिन् । जेठको तेस्रो साता प्रदर्शनमा आउने उक्त हरर चलचित्रमा ऋचालाई भूतको गेटअपमा देख्न पाइन्छ । आफ्ना हरेक चलचित्रमा केही न केही प्रयोग गर्न रुचाउने ऋचाले सुनकेशरीको भूतको भूमिकाबाट भने अत्यन्त आशा गरेकी छिन् ।
यो चलचित्रमा मैले निर्वाह गरेको पात्रले दर्शकहरूलाई तर्साउने त छ नै, ऋचा भन्छिन्– सँगसँगै मेरो यो नयाँ प्रयोगलाई सबैले मन पराउनुहुनेछ भन्ने कुरामा पनि ढुक्क छु ।
प्रकाशित :जेष्ठ ६, २०७५
प्रेमको अपेक्षा गरेकी छु
क्यानाडामा नेपाली सांस्कृतिक कार्यक्रम
नवनियुक्त प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीबाट के–कस्तो अपेक्षा गर्नुभएको छ ?
नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूबाट के–कस्तो अपेक्षा गर्नुभएको छ ?
लेखनाथको जन्मघरमा असार ११, २०७६
प्रेम गीत ३ मा अनुभव रेग्मी भित्रिए असार ११, २०७६
धेरै पछि हिसिला असार १०, २०७६
३३ वर्ष पुगे पनि बिहे नगर्ने ! असार ९, २०७६
सकियो ‘रातो टिका निधारमा’को छायाँकन असार ८, २०७६
‘साइनो’ को गीतमा टिक-टक बनाउँदा पुरस्कार ! असार ८, २०७६
अभिनेता दीपकराज गिरीको स्टाटसमाथि प्रतिक्रिया असार ८, २०७६
राजेशको प्रश्न करिश्माको उत्तर असार ६, २०७६
सबै प्रस्ताव अस्विकार असार ५, २०७६
बुवा भएपछि फलिफाप असार ४, २०७६